काठमाडौँमा जग्गा किन्न पैसा पुगेन ? उपत्यका कै यी स्थानमा भेटिन्छ अझै कम मूल्यमा जग्गा ! - Dainik Online Dainik Online
काठमाडौँमा जग्गा किन्न पैसा पुगेन ? उपत्यका कै यी स्थानमा भेटिन्छ अझै कम मूल्यमा जग्गा !
भनिन्छ कुनै पनि कार्यमा ढिला कहिल्यै हुँदैन जब सम्म तपाइलाई खाँचो हुँदैन , तर ढिला त्यो बेला हुन सक्छ जब तपाइले चाहेर पनि भनेको जस्तो हुँदैन । प्राय मानिसहरू जग्गा जमिनको बारेमा एक नासको धारणा बनाउँछन् , यदि मैले ३ बर्स अगाडी नै त्यो जग्गा किनेको भए ? तपाइलाई पनि यस्तो लागेको हुन सक्छ तर ख्याल गर्नुस् ढिला कहिल्यै हुँदैन । गुमेको अवसर मात्र देख्ने हरुले विद्यामान अवसर देख्न सक्दैनन् ।
तपाईँलाई कहाँ जग्गा किन्न मन छ ? केही बर्समा त्यो स्थान सरह वा अझै राम्रो हुने विकल्पहरू धेरै हुन्छन् , त्यसैले गुमेको मौकालाई अझै राम्रो को लागी हो भन्ने सोचौँ र विषयमा प्रवेश गरौँ ।
यहाँ हात्तिवन , डामाडोल , नखिपोट(सुनाकोठी , भैसेपाटी , पेप्सिकोला , कीर्तिपुर , बुढानीलकण्ठ , नारायण टार , ठिमी आदी तिर जग्गा हेरेर मूल्य सुन्दै हरेस खाएका मानिसले अर्को दुई तिन बर्स पछि फेरी हरेस नखान के गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल गर्न खोजिएको छ । यी उल्लेखित स्थानमा आवासीय घडेरी कै कम्तीमा २५ लाख देखी ९० लाख प्रति आना सम्म मूल्य तिर्नु पर्दछ । यी स्थानमा यो २-३ बर्समा ४ गुणा सम्म मूल्य बढेको पाइएको छ ।
यहाँ जम्मा २५ लाख देखी ६० लाख सम्म खर्च गरेर राम्रो , राम्रो भन्नाले आजै नै घर बनाउन सुरु गर्न सकिने , बस्ती भएको र यातायातको राम्रो सुविधा भएको स्थानमा भएको जग्गाको बारेमा बताउन खोजिएको छ ।
भक्तपुर : भक्तपुर आगामी दिनमा अझै आकर्षक स्थान हुने छ । तीनकुने जडीबुटी फलाइ ओभर र प्रस्तावित स्मार्ट सिटिले यसलाई अरू स्थान भन्दा सहज र अब्बल नै बनाउने छ । यहाँ दुवाकोट , खरिपटी , छालिङ , सरस्वती खेल , चाँगुनारायण , गुण्डु जस्ता स्थानका नयाँ विकसित र आधरभुत सुविधा भएका बस्तीहरूमा तपाइले प्रति आना ८ लाख देखी २० लाखसम्म तिरेर राम्रो घडेरी पाउन सक्नु हुनेछ ।
ललितपुर : ललितपुर धेरै विकल्प भएको जिल्ला हो , तपाईँलाई ग्वार्को पायक पर्छ भने लुभु लामा टार एरियामा खोज्न सक्नु हुन्छ जहाँ १२ (२० लाख प्रति आना राम्रो जग्गा भेटाउन सकिन्छ । लुभुमा जग्गा हेर्दा सानागाउ हुँदै विष्णुदेवी एरियामा पनि जान नभुल्नु होला । यसै गरी सात दोबाटो बाट भित्र ठैब देखी गोदावरी सम्म प्रति आना ८ लाख देखी २० लाख सम्मको जग्गाहरू पाउन सक्नु हुनेछ ।
त्यसै गरी चापागाउ दोबाटो बाट भित्र ठेको देखी चापागाउ सम्म १५ देखी ७ लाख प्रति आना सम्मको जग्गा पाउन सक्नु हुनेछ । आगामी दिनमा कान्ति लोक पथ र चापागाउ सम्म बिस्तार गर्न लागिएको बाटोको कारण यो एरियामा तीव्र मूल्य वृद्धि हुनेछ ।
भैसेपाटि देखी ३ किमी भित्र पनि आगामी दिनमा उच्च मूल्य वृद्धि हुनेछ । निर्माणाधीन मन्त्री र मुख्य मन्त्रीहरूको निवास , फास्ट ट्र्याक जस्ता योजनाहरूले भैसेपाटीको नजिक बस्न धेरैको रुचि हुन सक्छ । त्यसको लागी बुङ्मति , खोकना , फर्सिडोल , र त्यही नजिकै काठमाडौँ मा पर्ने टौदह वरिपरि को एरियामा ८ देखी माथि का जग्गाहरू छानिछानी लिन सकिन्छ ।
काठमाडौँ : कलङ्की सेन्टर हुनेहरूको लागी विष्णु देवी , मत्छेगाउ , एरिया बस्न राम्रो मानिन्छ , निर्माणाधीन सुरुङ मार्गले गर्दा बलम्बु र दह चोक एरिया मा पनि धेरै नै चहल पहल बढेको छ । सिता पाइलाबाट भित्र राम कोट एरिया पनि बस्न लाई अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ ।
नय बसपार्क तिर पायक पर्ने हुँदा टोखा , खहरे झोर तिर पनि हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै मुलपानी , थली , गोकर्ण एरिया पनि तीव्र सहरीकरण भइरहेको एरिया नै हो । यी सबै स्थानमा जग्गा हेरेर १० देखी २० लाख प्रति आना लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ ।
यो रिपोर्ट बस्न र लगानी गरेर एक दुई वर्षमा प्रतिफल लिन दुवै हिसाबले उपयुक्त हुने गरी तयार गरिएको हो । अर्को रिपोर्टमा हामीले जम्मा १२ देखी २५ लाख सम्म लगानी गरेर बस्न योग्य जग्गा पाइने उपत्यकाकै केही स्थान हरू बारे चर्चा गर्ने छौ । यो रिपोर्ट रियल स्टेट क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था “ए एन्ड ए बिजनेस प्राली” को सहयोगमा तयार गरिएको हो । थप जानकारीको लगी ९८४६६६२००१ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुने छ ।